क्वारेन्टाइनबाटै कोरोना ‘विस्फोट’ हुने डर ! भेडाबाख्रा जसरी राखिएको गुनासो
रुपन्देहीको कञ्चन गाउँपालिका–४ स्थित हरैया माविको चौर झाडीको रुपमा परिणत भएको छ । विद्यालय भवनको भुइँतलाको एउटा कोठामा बनाइएको क्वारेन्टाइनमा १ हप्ताअघि भारतको हैदरावादबाट आएका मीनराज गुरुङको परिवारसहित ७ जना बस्छन् ।
दिउँसोमा विद्यालयको चौरमा देखिने सर्पले गर्दा मीनराजलाई रातभर निद्रा पर्दैन । उनी भन्छन्, ‘दिउँसोको चर्को घाममा चौरमा विषालु सर्प देखिन्छन् । राति भुइँमै सुत्ने हुँदा सर्प आउँछ कि भनेर निद्रै लाग्दैन । उठेरै बस्छु ।’
विद्यालय भवनको क्वारेन्टाइनमा बस्नेलाई म्याट दिइएको छ । उनी आउँदा १५ जना रहेको क्वारेन्टाइनमा अहिले ४७ जना पुगेका छन् ।
‘हामी आएपछि अरु पनि ल्याएर राखिएको छ । शौचालय एउटै छ । भेडाबाख्रा जस्तै विद्यालयको गेटबाट भित्र हुल्छन् । यहाँ त सुरक्षित रुपमा आएकाहरूलाई पनि कोरोना सर्छ कि भन्ने डर भो ! न स्वास्थ्य परीक्षण, न सोधखोज । बिहान–साँझ खाना दियो, पुग्यो,’ उनले गुनासो गरे, ‘शौचालय एउटै छ । एउटै कोठामा ८–१० जना बस्नुपर्ने बाध्यता छ ।’
दाङको लमहीस्थित नेकपाको शहीद नेत्रलाल स्मृति प्रतिष्ठानमा भारतको पञ्जाबबाट आएर १२ दिनदेखि बसेका पशुपति ज्ञवाली शनिवारदेखि त्रासमा छन् । क्वारेन्टाइनमा उनीसँगै बसेका ६ जनामा कोरोना देखिएको छ । उनी भन्छन्, ‘हामीसँगै अर्को कोठामा बसेका व्यक्तिमा कोरोना भाइरस देखियो । सबैको एउटै शौचालय छ । एउटै हलमा हामी १९ जना कोचिएर बसेका छौं । संक्रमण यहीँबाट बढ्ला जस्तो भयो ।’
‘प्रतिष्ठानको ३ वटा हलमा गरी ५० जनाभन्दा बढी छन् । तराईको गर्मीमा हलभित्र थुप्रिएर बस्नुपर्दा एउटा पंखाले काम नै गर्दैन । तातोपानी खान हामीले नै एउटा इलेक्ट्रिक भाडो किनेर ल्याएका छौं, त्यसैमा तताएर खान्छौं । अवस्था विस्फोट नै होला जस्तो भयो,’ ज्ञवाली भन्छन् ।
कपिलवस्तुका शिवपुर आदर्श माविको क्वारेन्टाइनमा बसेका नारायण बञ्जाडेको गुनासोलाई पनि कसैले वास्ता गर्दैनन् । हालै भारतबाट आएका उनलाई क्वारेन्टाइनमा एउटै दालको पानी र भात दिन्छन् । खाए खा नखाए मतलब छैन जस्तो व्यवहार देखिएको उनको गुनासो छ । क्वारेन्टाइनमा लामखुट्टेले रातभर सुत्न पनि नदिने बञ्जाडे बताउँछन् ।
यी उदाहरण भारतबाट आएर क्वारेन्टाइनमा बसेका व्यक्तिको पीडा हो । स्थानीय तहले व्यवस्थापन गर्ने भनिएका क्वारेन्टाइन असुरक्षित हुँदा कोरोना संक्रमणको जोखिम झनै बढेको छ । तराईको गर्मी, टिनको छानामुनि बिच्छाइएका म्याटमा सुत्नुपर्ने बाध्यता छ, खाट छैनन् । केही हिँडेर त केही गाडीमा लामो यात्रा गरेर आएका व्यक्ति बिरामी पर्दा अस्पताल पुर्‍याउन समेत समस्या हुने देखिएको छ ।
पाल्पाको रिब्दीकोट गाउँपालिकाकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ऋषि अर्याल स्रोतसाधन, जनशक्ति र व्यक्तिको संख्याको आधारमा सरकारले तोकेको क्वारेन्टाइन सम्बन्धी मापदण्ड अनुसारको क्वारेन्टाइन बनाउन सम्भव नदेखिएको बताए । ‘विद्यालयका डेक्स–बेन्च जोडेर खाटको रुपमा प्रयोग गरिएको छ । २ पटक खाना र २ पटक खाजाको व्यवस्था छ । निरन्तर निगरानी छ । सुरक्षाका लागि स्वयंसेवक परिचालन गरिएको छ । यहाँ अरु गर्न स्थानीय तहलाई सम्भव छैन,’ अर्यालले भने । रिब्दीकोटका विद्यालयका क्वारेन्टाइनमा ९५ जना बस्दै आएका छन् ।
कपिलवस्तुको महाराजगञ्ज नगरपालिकाका प्रमुख अब्दुल कलामले स्थानीय तहमा पूर्वाधार अभावले क्वारेन्टाइन व्यवस्थित गर्न नसकिएको बताए । स्वाब संकलन गरेर रिपोर्ट आउन पनि कम्तीमा १ हप्ता लाग्ने गरेको छ ।
कपिलवस्तुमा एक स्थानीय तहले १ हजार ६०० जनासम्म व्यक्तिलाई विभिन्न विद्यालयका क्वारेन्टाइनमा राखेका छन् । एउटै कोठमा १० जनाभन्दा बढीलाई राखिएको छ ।
रुपन्देहीमा ८७ वटा क्वारेन्टाइन छन् । जहाँ भारतबाट आएका ३ हजार ५०० भन्दा बढी व्यक्ति बसेका छन् । भारतबाट आउने क्रम रोकिएको छैन । ५ नम्बर प्रदेशमा ३५ हजार व्यक्ति क्वारेन्टाइनमा छन् ।
प्रदेशमा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमण परीक्षण गर्ने किटको अभाव भएपछि परीक्षण रोकिएको छ । आरडीटी र भीटीएम किट सकिएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक डा. उमाशंकरप्रसाद चौधरीले प्रदेशमा क्वारेन्टाइन अवधि पूरा गरेका ५ हजार व्यक्ति रहेका र कुनै लक्षण नदेखिएको बताए । ‘प्रदेशमा अहिले किट छैन । केही दिनमा आउँछ अनि परीक्षणको दायरा बढाउँछौ । संक्रमण नदेखिएकालाई घर पठाउँछौं,’ उनले भने ।
प्रदेशमा १ हजार ३१३ क्वारेन्टाइन छन् । हालसम्म प्रदेशका ३ जिल्ला प्युठान, रोल्पा र रुकुम पूर्वमा कोरोना संक्रमण देखिएको छैन । प्रदेशको सबैभन्दा बढी संक्रमित कपिलवस्तुमै देखिएका छन् ।